दार्चुला घटनाको छानविन गर्न सरकारद्वारा समिति गठन « रिपोर्टर्स नेपाल
दार्चुला घटनाको छानविन गर्न सरकारद्वारा समिति गठन
काठमाडौं, १७ साउन । सरकारले दार्चुला घटनाको छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ । गृहमन्त्रालयले जयसिंह धामी दार्चुलाको मालघाट र भारतको गस्कुबाट तुइनको प्रयोग गरी महाकाली नदी तर्ने क्रममा वेपत्ता भएको घटनाको छानविन गर्न समिति गठन गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार गृहमन्त्रीस्तरको निर्णयबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव जर्नादन गौतमको अध्क्षतामा छानविन समिति गठन गरेको हो । समितिमा डिआइजी पुरुषोत्तम कँडेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, सशस्त्र प्रहरी बलका एसएसपी सुरेश कुमार श्रेष्ठ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका सहायक सिडिओ ज्योत्सना भट्ट छन् ।
महाकाली नदी तरेर सदरमुकाम खलंगा आउने क्रममा तुइन तरिरहेका ३३ वर्षीय धामी तुइनको तारसँगै वेपत्ता भएका थिए । उक्त घटनामा भारतको सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काटिदिएको विषय चर्चामा छ । प्रशासनले भने यसको अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
तस्करको ढुङ्गामुढा प्रहारबाट सशस्त्र प्रहरी घाइते
कञ्चनपुर, असोज ५ । जिल्लाको दोधारा चाँदनी नगरपालिका-७ कञ्जभोजमा भारतीय तस्करहरूले गए राति सशस्त्र प्रहरीको
मेयरलाई मुक्का हान्ने युवकको एमालेद्वारा बचाउ, मुद्दा नचलाउने
काठमाडौं, असोज ५ । नेकपा एमालेले बुटवलका मेयर शिवराज सुवेदीलाई मुक्का प्रहार गर्ने अनेरास्ववियुका सदस्य
भीम रावलको टिप्पणी : अब आएर राज्यले दिने तक्मामा पनि राजनीतिक भागबण्डा!
काठमाडौं, ५ असोज । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावलले राज्यले दिने तक्मामा पनि
कोरोनाले ज्यान गुमाएका दुई डिएसपीलाई वीरता पदक
काठमाडौं, असोज ५ । कोरोनाबाट संक्रमित भएर ज्यान गुमाएका नेपाल प्रहरीका दुई अधिकृतलाई सरकारले वीरता